ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသားကိုမှ ဆက်ပြီးရင်ဘတ်အောင့်နေတုန်းပဲလား? -
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီစာလေးက သင့်အတွက်ကို ရည်ရွယ်ပြီးရေးထားတဲ့အတွက် ဖတ်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်။
အသက်ရှူမဝခြင်း၊ နုံးခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေကို ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသက်သာကာစအချိန်မှာ ဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးရင်ဘတ်အောင့်တာတွေ တွေ့ကြုံနေရပြီဆိုရင် အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်တတ်ပေမယ့် စိတ်ပူရမယ့်အထဲတော့ ပါနေတဲ့အတွက် လျစ်လျူရှုထားလို့ မရပါဘူးနော်။ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
၁. Musculoskeletal chest pain
ဒါကတော့ ကြွက်သားတွေ ထိခိုက်မှုကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အောင့်တဲ့နေရာကို ထိမိရင်နာမယ်၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပြီးရင်ပိုအောင့်တတ်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကြောင့် ကြွက်သားရောင်ရမ်းပြီး နာကျင်နိုင်သလို မိမိလုပ်လေ့မရှိတဲ့ ဒိုက်ထိုးလေ့ကျင့်ခန်းမျိုး စပြီးလုပ်မိရင်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၂. Pleuritic chest pain
ဒီလိုမျိုးက စူးခနဲရင်ဘတ်အောင့်တာမျိုးပါ။ အသက်ရှူတဲ့အချိန်မှာ ပိုဆိုးရင် အဆုတ်ကိုကာရံထားတဲ့အမြှေးပါးယောင်ယမ်းတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီး ပက်လက်လှဲအိပ်တဲ့အခါပိုဆိုးပြီး ရှေ့ကိုင်းထိုင်လိုက်လို့ သက်သာသွားတယ်ဆိုရင်တော့ နှလုံးကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ အမြှေးပါးယောင်ယမ်းတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ပြီး သက်သာနိုင်ပေမယ့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး ကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
၃. Angina-type chest pain
ဒီလို ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းက နှလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ သွေးကြောတွေ ကျဥ်းတာ (သို့) ပိတ်ဆို့တာကြောင့် ဖြစ်လာတာပါ။ များသောအားဖြင့် ရင်ဘတ်ကို ဆွဲညှစ်ခံထားရသလိုမျိုး၊ ရင်ထဲမှာတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်တာမျိုး (သို့) ရင်ဘတ်ကို ဆင်နင်းခံထားရသလိုမျိုးတွေ ခံစားရပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်မောင်း၊ လည်ပင်း၊ မေးရိုးနဲ့ သွားတွေထိအောင် နာကျဥ်မှုက ပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ်။
အရမ်းမဆိုးရင်တော့ လမ်းမြန်မြန်လျှောက်ရင်၊ ပြေးရင်၊ တောင်တက်ရင်၊ လှေကားတက်ရင် ခံစားရတတ်ပြီး နားနေလိုက်တာနဲ့ အမြန်ပဲ သက်သာသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာ ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
ဒီထက်ပိုရောဂါဆိုးလာပြီဆိုရင်တော့ နည်းနည်းလှုပ်တာ (သို့) နားနေရင်းနဲ့ကို ရင်ဘတ်အောင့်တာမျိုး ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ပျို့အန်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ တွဲနေတတ်ပါတယ်။
၄. Non specific chest pain
ဒါကတော့ တိကျသေချာတဲ့ အကြောင်းရင်းမရှိဘဲ ရင်ဘတ်အောင့်တာပါ။ ရင်ဘတ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို ဖြစ်နိုင်ပြီး စူးခနဲအောင့်နိုင်သလို ဆွဲဆုတ်ထားသလိုမျိုးလည်း အောင့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါအောင့်ရင် စက္ကန့်ဝက်ကနေ နာရီပေါင်းများစွာအထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ခံစားရပြီဆို အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသဖို့လိုလဲ?
•ရင်ဘတ်အောင့်တဲ့အပြင် ပျို့အန်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာတွေပါ တွဲပြီး ခံစားနေရခြင်း၊
•ရင်ဘတ်အောင့်ပြီး ရုတ်တရက်သတိလစ်ခြင်းတွေ တွေ့ကြုံနေရပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသပြီး ကုသမှုကို ခံယူသင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရင်ဘတ်အောင့်တာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုရင်၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်ရင် အောင့်ပြီး နားနေလိုက်လို့ သက်သာသွားတတ်တာမျိုးဆိုရင်လဲ ပေါ့ဆမနေပဲ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Nov 2, 2021 Covid 19, Health Tips, Sex Education